दन्त स्वास्थ्य | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "दन्त स्वास्थ्य" दाँत बचाउँन गिँजा स्वस्थ राखौं डा.लिपिका श्रेष्ठ / मानिस हेर्दा स्वस्थ देखिए पनि उसको स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला समस्या देखिन सक्छ । स्वास्थ्यको बिषयमा कुरा गर्दा हामीले मुख र दाँतको स्वास्थ्य छुटाउन हुँदैन । कसैको मुख र दाँतमा समस्या छ भने उ जति स्वस्थ देखिए पनि उसको सास गन्हाउन सक्छ । मुख तथा दाँतको समस्या महिला, पुरुष, बृद्ध र बच्चा [...]
अस्वस्थ दाँतले रोग निम्त्याउँछ डा. सुदिन शाक्य निर्देशक, नेशनल डेन्टल अस्पिटल / दाँतमा केकस्ता समस्या देखिन्छन् ? दाँतमा विशेष गरि किरा लागेर दुख्ने समस्या बढी मात्रामा देखिन्छ । त्यसैगरी गिजामा हुने समस्याहरु, दाँत सुन्निने, दाँतको कारण अनुहार सुन्निने समेत हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गिजामा फोहोर जम्मा भएर रगत आउने समस्याहरु देखापर्ने गर्दछ । हाल दाँतको समस्याका कारण [...]
दाँत र शारीरिक स्वास्थ्यको सम्बन्ध डा. शुसील कोइराला, वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ / पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरूपमा विकासक्रम तथा आर्थिक अवस्थाका कारण किटाणु, व्याक्टेरिया र भाइरसबाट लाग्ने सरुवा रोग घट्दै र जीवनयापनका कारण हुने नसर्ने रोगको मात्रा बढ्दै गएको छ । नसर्ने रोगको प्रमुख कारण नकारात्मक सोच, खानपान तथा व्यवहार परिवर्तन हो । तरकारी र अन्य उत्पादन बढाउनकालागि प्रयोग गरिने कीटनासक [...]